इटालीका डाक्टर भन्छन् – को’रोना भा’रस क’म्जोर भैसक्यो, यो आफै ह’राएर जान्छ ! – Namaste Dainik
इटालीका डाक्टर भन्छन् – को’रोना भा’रस क’म्जोर भैसक्यो, यो आफै ह’राएर जान्छ !
September 2, 2020 September 3, 2020 NamastedainikLeaveaComment on इटालीका डाक्टर भन्छन् – को’रोना भा’रस क’म्जोर भैसक्यो, यो आफै ह’राएर जान्छ !
काठमाडौं । नेपालमा को’रोना सुरु भएको ६ महिना पछि को’रोनाका बारेमा केही सुखद समाचार आउन थालेका छन् । इटालीका बैज्ञानिकले अब को’रोना भा’इरसको क्षमता कम हुँदै गएको दावी गरेका छन् । रोग विशेषज्ञहरुले अब को’रोनाको खोप नबने पनि यसको क्षमता कम हुँदै गएर आफै हराउने दावी गरेका छन् ।
अमेरिकावाट प्रकाशित न्युयोर्क पोष्टमा उल्लेखित समाचार अनुसार सान मार्टिनो अस्पतालमा इन्फेक्सियस डिजिज क्लिनिकका प्रमुखस डाक्टर माटेओ बसेटीले यस्तो दावी गरेका हुन् । उनले सुरुको तुलनामा अहिलेक को’रोना भा’इरसको शक्ति कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् । उनले विस्तारै यो भा’इरस हराएर जाने पनि दावी गरेका छन् ।
समाचार माध्यमले बसेटीका भनाईलाई उल्लेख गर्दै भनेको छ, मार्च र अप्रिलको शु’रुको तुलनामा अहिलेको अवस्था निकै फरक बनिसकेको छ । सुरुको समयका भा’इरसको शक्ति बढी हुने भएकाले मानिसलाई भाइरसले धेरै च्याप्थ्यो तर अहिले रोकथाम गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका छन् । सुरुमा धेरै विरामीलाई अक्सिजन दिएर भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको भए पनि अहिले त्यो अवस्थाका विरामी निकै कम भएको उनको दावी छ । त्यसरी आउने विरामीम निमोनियाको समस्या देखिएको उनले बताएका छन् ।
मानिसहरुले स्वास्थ्य प्रति सजगता अपनाएका कारण अहिले को’रोनाको जोखिम कम हुँदै गएको उनको अनुमान छ । को’रोना भाइरस नि’यन्त्रणको लागि लकडाउन गर्ने, मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम राख्नेजस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाएका कारण पनि को’रोना भा’इरसले स्वरुप परिवर्तन गरेको हुनसक्ने उनले बताए ।
बसेटीले शोधकर्ताहरुले खोप विकास गर्नुभन्दा पहिला नै को’रोना भा’इरस हराउन सक्ने दावी पनि गरेका छन् । तर अन्य केही वैज्ञानिकहरुले भने को’रोना अझ केही वर्ष रहने दावी गरेका छन् । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एक्सेटर मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक भरत पंखानियाले अझ केही वर्ष को’रोना भा’इरस पृथ्वीमा रहने बताएका हुन् । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि को’रोना भा’इर’सको कारण अहिले झन् धेरै मानिसहरुको नि’धन भइरहेको बताएको छ । डब्ल्यूएचओले को’रोनाको स्वरुप परिवर्तन भएको दावी गरेको छैन ।
चीनले सुरु गर्यो भारतमाथी ह’म’ला, एक भारतीय सैनिकका मेजरको मृत्यु
नेकपामा फेरी धान्नै नसक्ने हलचल ।
जगदम्बा स्टिलले उत्पादन गरेका फलामे रडको गुणस्तर कमजोर।
August 25, 2020 August 25, 2020 Namastedainik
यी ४ राशिका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन्
September 9, 2020 Namastedainik
काठमाण्डौ उपत्यकाले राता रात सार्वजनिक गर्यो सर्वसाधारणको लागि यस्तो सूचना ।
August 29, 2020 Namastedainik